बाठो स्यालको झूठो प्रसंसा access_timeपुस २१, २०७७
एउटा काग रुखको हाँगामा बसेको थियो । उसले आफ्नो चुच्चोमा रोटीको टुक्रा च्यापेको थियो । त्यत्तिनै खेर एउटा भोकाएको स्याल त्यहाँ आइपुग्यो । उसले कागको चुच्चोमा च्यापेको रोटी देख्यो । त्यो रोटी खान पाए त भोक शान्त हुन्थ्यो भनेर स्यालले ठान्यो । उसले क...
कुकुर र गधा access_timeपुस २१, २०७७
एउटा गाउँमा धोबी थियो । उसले घरमा रखवाली गर्न कुकुर पालेको थियो । साथै, सामान ओसार्न गधा पनि पालेको थियो । एक दिन एउटा चोर धोबीको घरमा आयो । ऊ चोरी गर्न आएको थियो । कुकुर मस्त निद्रामा थियो । उसले चोर आएको थाहा नै पाएन । तर गधा भने सुतेको थिएन ...
चीनका नीतिकथा : धैर्य access_timeभदौ ९, २०७६
एकजना पढाकु लोकसेवा पास गरेर सरकारी अधिकृत पदमा नियुक्त भयो । नियुक्तिको खुसियालीमा उसले साथीहरुलाई चियापार्टी दियो । पार्टीमा एकजना हितैषीले भन्यो, “तिमी बढी जनसम्पर्क हुने अड्डामा हाकिमको काम गर्न जाँदैछौ, तिमीले हरेक क्षण धैर्यले काम लिन सक्नुपर्छ ।”...
अहिंसकको चालबाजी access_timeअसार २३, २०७६
एकपटक एकजना अहिंसकले एउटा कछुवा भेट्टायो । उसलाई कछुवाको मासु खाउँ खाउँ लागेर आयो । तर आफू अहिंसक ! अहिंसकले आफ्नै हातले जिउँदो कछुवा कसरी मार्ने ? सोच्यो, मार्न त हुँदै भएन, मासु पनि खानै पर्‍यो । अहिंसकले अँगेनामा खड्कुलो बसालेर पानी भकभकी उमाल्यो । ख...
कछुवा र बाँदर access_timeजेठ १८, २०७६
एउटा जंगलमा बाँदर र कछुवा घनिष्ट मित्र थिए । दुवैका बस्ने वास अलग अलग ठाउँमा थिए । दुवै एकार्कालाई आफ्आफ्ना घरमा बोलाइरहन्थे र आदरसत्कार गरिरहन्थे । एक दिन ती दुवै मित्र घुमफिर गर्ने विचारले बाहिरी यात्रामा निस्के । केही परपुगेका मात्र थिए, हुरीले ढालेको केराको ए...
चाकरी access_timeजेठ २, २०७६
एकजना गरीब थियो । ऊ जतिसुकै दुःख झेल्नु परे पनि धनीमानी साहुको चाकरी गर्दैनथियो । एक पटक एकजना धनवान् उसलाई सोध्यो, “म यति धनवान् छु तर पनि तँ मेरो चाकरी गदैनस् किन हँ ?” चाकरी गरेका भरमा तिमी तिम्रो धन कसैलाई दिने हैन क्यार ! म बेकारमा तिम्रो...
गङ्गटो र वानर access_timeजेठ २, २०७६
कुनै एक नदीकिनारमा जखडबन्द नामको एउटा गङ्गटो बस्थ्यो । नदीकिनारकै घना जङ्गलमा चपलसिङ् नामको एउटा वानर पनि बस्थ्यो । एक दिन नदी किनारकै एउटा ढुङ्गामाथि बसेर वानर आँपको कोया चुस्दै थियो । आफ्ना हातले पहेँलो बाटुलो नमकीन बिस्कुट लिएर कुत्रुक् कुत्रुक् हिँडिरहेको गङ्गटो दे...
कथा: सपनामा सहयोग access_timeबैशाख १८, २०७६
पुरानो चीनको कुरा हो । शाही परीक्षामा सम्मिलित भएर जाँच दिइरहेको एक परीक्षार्थीले एक पटक अनुशासनको उल्लङ्घन ग¥यो । सुइँको पाएर परीक्षकले उसलाई पक्राउ पठाएर आफ्नो कक्षमा उपस्थित गरायो र कडाभन्दा कडा दण्ड दिन खोज्यो । परीक्षक असाध्यै निठुरी छ भन्ने कुरा परीक्षार्थील...
बालबालिका हुर्काउने तरिका access_timeबैशाख १७, २०७६
एक दिन चाङ्सनकी श्रीमती बजार जान लाग्दा सानो छोराले म पनि जाने भनेर जिद्दी गर्‍यो । छोरालाई मनाउन चाङसनकी श्रीमतीले भनिन्, “बाबु, तिमी आज बजार नजाऊ , घरै बस । भरे म फर्केपछि खसी काटौंला र तिमीलाई कपाफ खान दिउँला, हुन्न ?” बेलुका घर फर्कँदा ...
कन्जुस साहू ! access_timeचैत ४, २०७५
पुरानो चीनको एउटा बस्तीमा एकजना कन्जुस साहू थियो । उसले टाढाटाढाका गाउँबस्तीहरुसम्म ब्याजका लागि पैसा लगानी गरेको थियो । ऊ गरीब किसान र कामदारहरुबाट बडो निर्दयरुपमा रिनको सावाँब्याज उठाउने कुरामा नामुद् थियो । कमाउँदा–कमाउँदा कन्जुस साहुका कपाल फुले । ...